Gmail अद्यावधिक ... कहिल्यै भन्दा राम्रो Martech Zone
Gmail अद्यावधिक… कहिल्यै ढिलो भन्दा राम्रो
मंगलवार, जुलाई 12, 2011 शनिबार, अक्टोबर 29, 2011 Douglas Karr
जब म वास्तवमै गुगल + र ईन्टरफेसको सरलता र ठूलो उपयोगिताको आनन्द लिइरहेको छु, जीमेल अन्य दिशामा एक मिलियन माईल प्रति घण्टा गएको देखिन्छ। मैले आज रात जीमेलमा ईमेल खोलेँ र शाब्दिक रूपमा ईमेल पढ्न सकिन:
यदि तपाईं आज जीमेलमा राम्रो नजर राख्नुहुन्छ भने, यो सयौं प्राप्त भयो (स्क्रिनमा नेभिगेसन एलिमेन्ट्सको कुनै सशक्त छैन)। यो एकदम हास्यास्पद छ ... प्रासंगिक विज्ञापनदेखि लिएर सबै चीजहरू (माथिको र दायाँ), सेयर गर्न (माथि दायाँ), थप प्रयोगकर्ताहरूलाई आमन्त्रित गर्न (तल बायाँ), सबै कलआउट्स जुन शारीरिक रूपले सन्देश पढ्ने प्रयास गर्दैछु।
यो शुद्ध मेहेम हो जब तपाईं यसलाई गुगलको आधारभूत रेखासँग तुलना गर्नुहुन्छ:
यहाँ गुगल प्लस मा एक राम्रो लुक छ:
धन्यबाद, यो मान्छे मा जस्तो देखिन्छ जिमेलले मुद्दा बुझे र नयाँ प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस छिट्टै आउँदैछ:
म केवल जीमेलको बारेमा रेन्टिंग गरिरहेको छैन ... यो हरेक कम्पनीको लागि पाठ हो। मैले एक पटक क्षेत्रीय रूपमा लोकप्रिय कम्पनीको आलोचना गरें किनभने उनीहरूको गृह पृष्ठमा २०० भन्दा बढी नेभिगेसन तत्वहरू थिए। यसले साइटलाई काम नलाग्ने बनायो। जबकि म बुझ्दछु कि कम्पनीलाई यसको उत्पादनहरू, सुविधाहरू, ग्राहकहरू र अन्य जानकारीका बारे गर्व छ… यो तपाईंको साइट वा एप्लिकेसनको एकल पृष्ठमा सबै कुरा कागजात गर्न आवश्यक छैन।
आगंतुकलाई उनीहरूले खोजिरहेका कुराको लागि पर्याप्त जानकारी प्रदान गर्नुहोस्।
अधिक गर्न चाहने प्रयोगकर्ताहरूका लागि विकल्पहरू प्रदान गर्नुहोस्। यसलाई 'प्रगतिशील खुलासा' भनिन्छ। अर्को शब्दहरु मा, केवल एक आगन्तुक लाई निरपेक्ष तत्व प्रदान गर्नुहोस् ताकि उनीहरु लाई के आवश्यक को पूरा गर्न सक्छन्। र यदि तिनीहरूलाई गहिरो खन्न आवश्यक पर्दछ भने, ती विकल्पहरू उपलब्ध गराउन पथ प्रदान गर्नुहोस्।
सबै तपाईको साइटमा प्रकाशित गर्नु हुँदैन। उपकरणहरू, प्लगइनहरू, फारमहरू, र अन्य add-ons लाई थप अनुरोध गर्न व्यक्तिहरूलाई अनुमति दिनुहोस्।
तपाईंको टोलीमा कम्तिमा एउटा व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउनुहोस् तपाईंको लडाईको लागि र तपाईंको आन्तरिक साथीहरूले गृह पृष्ठमा थप्न चाहेको हरेक थप तत्वको बहस गर्न। यो एक युद्ध हुनुपर्छ! मा निर्भर गर्दछ विश्लेषण मुद्दा प्रमाणित गर्नका लागि - कमले सँधै ठूलो प्रयोग र रूपान्तरणको परिणाम दिन्छ।
मेरो विचारमा, नयाँ जीमेल ईन्टरफेस अझ बढी सरलीकृत गर्न सकिन्छ ... सम्भवत नेभिगेसन भित्र प्रत्येक कार्यको लागि प्रत्येक बटनको सट्टा उन्नत लिंकको साथ। अझ राम्रो, मानिसहरूलाई लुकाउन दिनुहोस् र उनीहरूले अधिक ख्याल गर्ने तत्त्वहरू देखाउन। म अपडेटको लागि हेर्दै छु, यद्यपि, कम्तिमा मेरो ईमेल पढ्न सक्दछु।
भिडियो: सोशल मीडिया क्रान्ति 3
ब्रायन डी शेल्टन
जुलाई,, २०१ at 13::2011। बिहान
डग, म नयाँ ईन्टरफेस को लागी इंतज़ार गर्न सक्दिन! तपाईं आफ्नो दृढ निश्चयमा बिल्कुल सही हुनुहुन्छ कि तपाईंले आधारभूत उत्पादनको साथ सुरू गर्नुपर्दछ र उनीहरूलाई चाहने प्रयोगकर्ताहरूको लागि सजिलैसँग "अभिवृद्धि" र "उन्नत सुविधाहरू" उपलब्ध गराउनुपर्दछ। चिन्तित पोष्ट के मैले उल्लेख गरे कि म नयाँ जीमेल ईन्टरफेसको लागि कुर्दिन सक्दिन? 🙂
मैले पहिले नै नयाँ ईन्टरफेस पाएको छु। यसको सेटिंग्स, मेल सेटिंग्स, थिमहरू, पूर्वावलोकन थिम अन्तर्गत। म भुक्तान अनुप्रयोगमा छु यति निश्चित छैन यदि यसको एक विकल्प गैर-भुक्तान गरिएको हो वा होईन। यसको तरिका राम्रो छ। साथै तपाईंले चेकआउट गर्न आवश्यक छ http://www.rapportive.com